Madaxweynaha Kenya Oo Booqasho Dhuumasho Ah Ku Yimid Deegano Ka Mid Ah Somaliya , Xukuumada Moqdisho Oo Aan Ogey Iyo Ujeedka Safarkiisa + Sawiro |
Madaxweynaha Kenya Oo Booqasho Dhuumasho Ah Ku Yimid Deegano Ka Mid Ah Somaliya , Xukuumada Moqdisho Oo Aan Ogey Iyo Ujeedka Safarkiisa + Sawiro
Moqdisho (GNN):- Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta booqasho qarsoodi
ah ku tagay magaalada Dhoobley ee Gobolka Jubadda Hoose ee Soomaaliya, una dhow xadka Kenya.
Warbaahinta Kenya ayaa booqashada maalintii shalay aheyd Madaxweyne Uhuru ku tagay Dhoobley ku tilmaamay mid taariikhi ah.
Uhuru Kenyatta oo ah Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka sida Kenya ayaa isagoo xiran dareys milateri waxay diyaarad helicopter ah ka dejisay saldhig Ciidamada Kenya ee ka tirsan howl galka AMISOM ku leeyihiin Dhoobley.
Booqashadan ayaa lagu tilmaamay mid uu Madaxweynaha Kenya ku dhiira gelinayay ciidamada Kenya ee ka qeyb qaadanaya howl galka AMISOM.
Waxaa uu ku amaanay in ciidanka kenya inay si naf-hurnimo ah u gudanayaan waajibaadkooda, una difaacayaan dalkooda hooyo.
“Joogitaankiina Soomaaliya, wuxuu bad baadiyay nafaf badan, dadka kenyan ah waligood way idinku faani doonaan, joogitaankiina halkan waxay ugu yaraan dadka ka qaaday cabsidii Al-Shabaab”ayuu yidhi Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo la hadlayay Ciidamadiisa.
Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay kala hadlayaan muhiimada inay dhistaan ciidamadooda Milateri, si ciidamadiisa ay dalkooda ugu laabtaan, taasoo ah qeyb ka ah buu yiri istiraatiijiyadooda ay uga baxayaan Soomaaliya.
Saldhiga Milateri ee Dhoobley ayaa ka mid ah xarumaha howl galka AMISOM ee ay leeyihiin Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya.
Booqashada Uhuru ee Dhoobley ayaa loo arkaa olole doorasho, maadaama dhowaan uu geli rabo Tartan adag oo ah doorashada madaxtinimada dalkiisa, xilli mucaaradka ay dalbanayaan in Ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in aanay ka war-qabin socdaalka Qarsoodiga ah ee Madaxweynaha Kenya ku tagay magaalada Dhoobley ee ku taala xuduuda Soomaaliya ay la wadaagto Kenya, taasoo ah mid xadgudub heykalka dowladnimo iyo sharciyada socdaalka.